Guangzhou, China Apho Omnye Girls Omnye Mans Ukuhamba
Guangzhou, China yi enkulu yesixeko kwi-China oko kukuthi absolutely lizele abafazi bonke wanting a langaphandle iqabane lakho. Oku ngeposi kuthi get uqale kwi apho kuhlangana kwaye umhla omnye ladies kwi-Guangzhou. Wemiceli-ingxaki kwi-Guangzhou nakwi-China ingaba steep ulwimi barrier. Hayi ezininzi girls phantsi ingaba oza kukwazi ukuthetha isingesi njengoko okulungileyo njengoko ungathanda kodwa abanye kubo izakuzama zabo elililo best, Intlanganiso girls kwi-nightlife kwiindawo kuya kuba lula kakhulu. Baya kuba sifuna antonio apho kusoloko ngokuphonononga nathi ngaphandle, dibanisa ukuba babe basemazweni iinkwenkwezi kwaye besela kuya phezulu discos kwaye clubs ngayo ayi rhoqo kangangoko malunga socializing kodwa ngenye hooking a boyfriend, elizayo umyeni okanye kumazwe angaphandle iqabane lakho kuba ngobusuku okanye ezimbini. Oku mhlawumbi izakuba omnye hardest iindlela, kodwa ukuba sifakwe kwi-iinzame kokuba babe umsebenzi ngaphandle kuba ufuna nje kakuhle. Ukuba ufuna _imaphu yesigingqi kwi gorgeous Guangzhou umfazi kwi-inqwelo malls okanye ngaphandle kwaye malunga uyakwazi ncuma kwaye uye uzame kwaye yathetha kubo, eyona imbi ukuba ingaba kwenzeka kukuba babe wena okanye babe uncomfortable ukuzama ukuthetha isingesi kunye nawe. Taikoo kakhulu upscale mall apho kufuneka babe nako ukuhlangabezana abanye ‘yakhe’ girls kule ndawo. Kukho plenty kwezinye izinto ezilungileyo iindawo nangona njenge Beirut Road, Guangzhou Abarhwebayo Pedestrian Street, Mouse Street, kwaye mall phantsi CTF Iimali Kwencopho. Xa samakhosikazi Guangzhou uphumile kwi-iinkwenkwezi okanye uncwadi besela, baya kuba hayi ke conservative kwaye iya kuba nkqu vula i-fact abazithandayo ukuze senzo zabo isixhosa kwaye uyi prime umgqatswa kuba oku. Abaninzi Guangzhou girls kuba nomdla inzala kwi-foreigners, kodwa uninzi ingaba ngenene ukuba neentloni ukuzama ukuncokola nawe kwi-wonke. Iinkwenkwezi kwaye discos kwesinye isandla, baya kuba kulungile ukuba ingaba incoko kwaye uvavanyo kwamanzi. Eyona ndlela ukufumana elonyuliweyo kwi-Guangzhou ngu bebalindele ukuba indlela wena kwi bar okanye club kwaye yiya ukusuka apho. Ukuba babe indlela wena, bamele noba antonio ngokwaneleyo baya kuba ezilahlekileyo abanye babo inhibitions okanye babe nje ngenene na jonga kuni kwaye ufuna ukufumana phandle ngakumbi. Abanye elihle iinkwenkwezi ukukhangela ngaphandle ngala Parry Irishname Pub, Bhabhilon elide, Tavern, kwaye Hooley ke. Kwakhona khumbula ukuba, ukuba ngaba incwadi a room ka-Airbnb a Guangzhou umfazi uza kuba ngaphezulu ethambileyo ke emva endaweni yakho ngaphezu ukuba mema yakhe ukuya seedy cheap hotel. Guangzhou girls ingaba mhlawumbi izakuba ukufunda isingesi kwi-i-emva-iiyure esikolweni okanye ngezifundo, kodwa uninzi aren khange kakhulu ethambileyo ukuthetha ngayo ngenxa yabo shyness. Ukuba bayagwetywa kwi dating site, bamele mhlawumbi ukwazi ukufunda kwaye ubhale kuyo kwaye ukuphakanyiswa ikhangela a foreigner ukuba hook phezulu kunye. China Uthando Amakhonkco yi free ukuba sayina kwaye uza literally kuba amawaka kwaye amawaka imiyalezo kakhulu ethanda sexy Guangzhou abafazi wanting ukuya kuhlangana nawe ilungelo kude kuba umhla. Ngenxa Guangzhou ungummi kakhulu rare kweentlobo zezityalo apho ke ngoko yayo s yezithuthi ngaphantsi travelled kwaye hayi ezininzi foreigners ndiya kuhamba apha ikhangela abafazi. Eyona ngxaki nokungabikho konxibelelwano kwi-wobulali ulwimi ngokuqinisekileyo uya kuba kuphela into isebenza ngokuchasene nani. Kunye okokuba wathi, ukuba nani ngonaphakade kubona pretty kubekho inkqubela kufutshane ungasoloko indlela yakhe waza wasinikela a zama. Ukuba yena ayi instantly anomdla, nje chu emva ngaphandle, kodwa ukuba yena, ngoko ke, izinto ziya ngokuqinisekileyo umsebenzi ngaphandle ubuncinane kwixesha elifutshane. Omnye-busuku kumi ingaba enkulu kodwa marrying enye yezi girls basenokuba sesinye iinketho njengoko zinjalo kakhulu loyal kwaye fiercely protective kuni ngenxa yokuba indlela esisebenza kukho ukuba phantse wonke kubekho inkqubela ukuba ufuna a foreigner kuya kuzanywa ukuba steal nawe ngomhla wonke omnye mzuzu, yena ayikho jikelele kuwe. Ukuba ufuna guys kufuneka yoqobo ikhondom ukusuka e-USA kunye efanelekileyo ubungakanani * faka.
abo ngalo real brands kwaye bathethe isingesi.
inqanawa kuyo yonke indawo kwi-China
Nayiphi na young ladies bazive ngathi escorting a phezulu guy jikelele Guangzhou kuba ezimbalwa imihla kwi-ngeveki yokuqala kweyomnga. get in touch njengoko uphumelele khange abe disappointed njengoko dollazi kuba ixesha lakho. Ndifuna kuhlangana kunye Isitshayina omnye kubekho inkqubela kwi-Guangzhou ukuba ukhe ubene anomdla ukuya kuhlangana kunye nam Nceda uqhagamshelane kum. Mna isicwangciso ukundwendwela Guangzhou iveki elandelayo disemba ukuya Jan. Ndinguye apha kuba vacation kodwa ungathanda ukuba ahlangane a discreet elonyuliweyo yokuchitha ixesha lam kunye kwaye ukuba ndincede imvelaphi kushishino unye.
Ndidinga ukwenza ezinye ushishino nabo
MOLO ndinguye Mohammad, ndinguye anomdla ukuba ahlangane a kubekho inkqubela kwi-Guangzhou, ngenxa ndindodwa apha lonke ixesha kwaye ndim yokufumana okruqukileyo. WeChat: hamada, enkosi molo, mna uya kuba Guangzhou kuba ngeveki iqala epreli kwaye ufuna kuba kubekho inkqubela ukuba abe nam kuba imihla kwaye kulala nam yiya kwi bar njalo-njalo. Mna m a omnyama i-american ukuqhuba ushishino ngendlela Singapore, kokuza Guangzhou ngojuni, ndidinga a sweet young elonyuliweyo kuba inkampani kwaye touring jikelele-China.
Yena kufuneka nazi ezinye isixhosa ubuncinane
← Phezulu amazwe kuba omnye Asian guys ukuhlangabezana zinokuphathwa girls
Yeemvakalelo zakho advert malunga ne-China ke 'leftover abafazi' uyaya viral - BBC News →